Tetibola 2017 Hiadian-kevitra etsy Antaninarenina
Mikarakara adihevitra misokatra manodidina ny volavolan-dal�na mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2017 izay dinihina eny anivon�ny Parlemanta ny CCOC (Collectif des citoyens et des organisations citoyennes).
Hotanterahina anio etsy amin’ny tranoben’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria izy io anio talata 15 novambra 2016 ary natao ho an’ny besinimaro. Lalànan’ny tetibola 2017, fitaovana ho an’ny fampandrosoana mampiaty ? Io no ho lohahevitra hitondrana ny adihevitra. Tanjona ny tsy hahatompontrano mihono ny olompirenena momba ilay tetibola.